मानव प्रगति र डेल टेक्नोलोजी विश्व | Martech Zone
मानव प्रगति र डेल टेक्नोलोजी विश्व
आइतबार, मे 13, 2018 Douglas Karr
यदि तपाईंले मात्र मुख्यधारा मिडिया स्रोतहरूमार्फत टेक्नोलोजीमा ध्यान दिनुभयो भने, तपाईं लाग्नुहुन्छ कि स्वायत्त कारहरूले मानिसहरूलाई मार्दैछन्, रोबोटहरूले हाम्रो जागिर लिइरहेका छन्, र प्रविधिले हामीलाई विनाशमा पुर्‍याइरहेको छ। बजारका रूपमा, मलाई यो महत्वपूर्ण लाग्छ कि हामी त्यहाँ अर्को हत्यारा अनुप्रयोगमा ध्यान मात्र दिदैनौं, हामीले अवलोकन गर्नु पर्छ कि कसरी प्रविधिले जीवनलाई असर गरिरहेको छ र उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूको व्यवहारमा।
बारेमा तथ्यहरु डिजिटल परिवर्तन एकदम विपरित हो।
स्वायत्त वाहनहरूको साथ सुरु गरौं। मानिसहरु लाई घातक कार दुर्घटनाहरु जारी छ, प्रत्येक दिन औसत 3,287,२XNUMX अमेरिकीहरुको मार। बौद्धिक अटोमोबाइल्सले मार्दैन ... तिनीहरूले जीवन बचाउन लागेका छन्। वास्तवमा, म अनुमान गर्छु कि तिनीहरू पहिले नै थिए। लस भेगासमा डेल टेक वर्ल्ड जाने क्रममा मैले यस सडकमा एउटा नोट लेखें जसमा केहि वर्णनहरू छन् नयाँ क्रिसलर Pacifica का सुविधाहरू म भाडामा लिन्छु। मलाई कुनै शंका छैन कि त्यो कारको स्वायत्त कार्यले मेरो 5,000,०००-माईल यात्रा भर दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्‍यो।
काम लिदै हुनुहुन्छ? जबकि टेक्नोलोजीको प्रत्येक प्रगतिले केहि रोजगारको आवश्यकता हटाउँदछ, नयाँ रोजगारहरू यहाँ छन्। तीस वर्ष अघि कसैले पनि कल्पना गरेन (म सहित) मैले डिजिटल एजेन्सी चलाइरहेको छु र कम्पनीको लागि पोडकास्टहरू उत्पादन गरिरहेको छु जुन घरबाट बनेका कम्प्युटरहरू ग्यारेजमा बेचेर शुरू भयो। मसँग हजारौं सहयोगीहरू राम्रो कामका लागि क्षतिपूर्ति भइरहेको छ जुन केहि दशक पहिले कहिल्यै अस्तित्वमा थिएन।
म अल्पसंख्यक हुन सक्छ जब यो स्वचालन को लागी आउँछ। म निराशावादी हुँ जसले विश्वास गर्दछ कि अटोमेसनले काम लिदैन; यसले अझ बढि अवरोधहरू हटाउँदैछ। को यस मौसम को भाग को रूप मा ल्युमिनरीहरू पोडकास्ट, हामीले संस्थापकको अन्तर्वार्ता लियौं DAQRI, एक संवर्धित वास्तविकता कम्पनी जसले वर्कसेन्स भनिने प्रणालीमा सफ्टवेयर र हार्डवेयरको संयोजन गर्‍यो।
DAQRI जस्तो एआर प्लेटफर्मको साथ एक कुशल कामदारलाई जोड्नुहोस् जसले नोटहरू, निर्देशनहरू प्रकट गर्न सक्दछ, र तपाईंलाई वास्तविक समयको विशेषज्ञसँग जडान गर्न सक्दछ ... र त्यो कामदारले उपकरणमा निवारक र सुधारात्मक मर्मत गर्न सक्षम हुनेछ जुन उनीहरूसँग तालिम पनि छैन। । त्यसो भए यसले हाम्रो कामका अवसरहरू विस्तार गर्दछ, तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैन।
टेक्नोलोजी साथ साथै कुशल हुँदै गएको छ। बढेको भण्डारण, कम्प्युटिंग पावर, र डाटा ट्रान्सफर रेटहरूले उल्लेखनीय रूपमा कम पावर प्रोफाइलहरूको साथ काम प्रति इकाई उर्जा कम गर्न मद्दत गर्दै छ, यसलाई बढाउँदैन। र यसले हामीलाई परम्परागत उद्योगहरू परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ जुन हामीले सोचेका थिएनौं पुनर्नवीत हुन सक्छ। एरोफार्म्सउदाहरण को लागी, फार्मको उत्पादनहरु oors 390 ०% ले घरको भित्र सार्दै, सस्तो, किफायती बत्ती बालेर प्रत्येक बालीलाई ट्यून गर्दै र पानीको आवश्यकतालाई 95%% ले घटाउँदै छ। इनडोर खेतीले पौष्टिक खाना सस्तो र ग्रहमा प्रत्येक व्यक्तिलाई पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ।
म मेरा ग्राहकहरुलाई चेतावनी दिन जारी राख्छु कि हामी टेक्नोलोजी रूपान्तरणको नयाँ तरंगमा छौं। स्केलेबल कम्प्युटिंग पावर, उच्च-स्पीड वायरलेस जडानहरू, र असीमित भण्डारणले गेटवे खोल्दै छ कृत्रिम बुद्धि, गहिरो शिक्षा, मेशिन शिक्षा, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन, र कुराको इन्टरनेट.
अहिले सम्म बेचेको छैन? गुगलले हालसालै यसको प्रदर्शन प्रदर्शन गर्‍यो Google सहायक त्यो तपाइँको दिमाग परिवर्तन गर्नु पर्छ। गुगल सहायक अग्रणी धारमा छ - तपाईंको IoT उपकरणको लागि निर्देशन दिन्छ तपाईंको लागि अपोइन्टमेन्ट गर्न। यी प्रगतिहरूको परिष्कारले एप्पल र एमेजोन जस्ता गुगलका प्रतिस्पर्धीहरूलाई शाब्दिक रूपमा गाड्न सक्छ यदि तिनीहरू जारी राख्न असमर्थ छन्। यद्यपि त्यो मनमोहक नहुन सक्छ, याद गर्नुहोस् कि मानिसहरूले सोचेनन् कि नोकिया र ब्ल्याकबेरीले पनि आफ्नो प्रभुत्व गुमाउनेछ।
पाठ केवल टेक्नोलोजी कम्पनीहरूका लागि छैन, यो हरेक कम्पनीको लागि पाठ हो। ग्रहमा प्रत्येक उत्पाद र सेवा सुधार गर्न सकिन्छ वा यी प्रविधिहरूको साथ बदल्न सकिन्छ। हरेक कम्पनीले उपभोक्ताको लागि जडान सिर्जना गर्न सक्दछ जुन पहिले अवस्थित थिएन। मेरो घरको एचभीएसी प्रणाली अर्को हप्ता नयाँ, अधिक कुशल प्रणालीको साथ प्रतिस्थापन भइरहेको छ।
म कूलर घर र कम उर्जा बिलको लागि हेर्दै छु, सबैभन्दा ठूलो प्रगति भनेको कम्पनीले प्रोग्राम योग्य थर्मोस्टेट र अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिरहेको छ। प्रणाली १० बर्षे वारेन्टीको साथ आउँदछ ... र अनुगमन प्रणालीले मेरो HVAC कम्पनीलाई वास्तवमा सचेत गराउँछ यदि त्यहाँ कुनै समस्या छ भने। यस सेवा कम्पनीसँग अब यस प्लेटफर्मको माध्यमबाट यसको ग्राहकसँग १० बर्ष सम्म सीधा सम्पर्क छ - मलाई स्प्याम गर्न तेस्रो-पार्टी प्लेटफर्मको आवाश्यक छैन। यो सबै भन्दा राम्रो ग्राहक रिटेन्शन प्रणाली हो। र, एक उपभोक्ताको रूपमा, म जडानलाई स्वागत गर्दछु!
यो आवश्यक छ कि तपाईंको कम्पनीले तपाईं कसरी अपनाउने बारे सोच्न सुरु गर्नुहोस् र तपाईंको कम्पनीले बिस्मृत हुन अघि तपाईंको उद्योगलाई कसरी हावी हुन सक्दछ।